मोडल Archives - Sawal Nepal
एजेन्सी । हरेक कलाकारहरुले आफ्नो फ्यानहरुलाई खुशी बनाउनकालागी धेरै नै मेहेनत गर्ने गदर्छन् । आफ्ना फ्यानहरुलाई खुशी बनाउन उनीहरु जस्तो सुकै मूल्य पनि चुकाउन तयार रहन्छन् । विश्वका सबै कलाकारहरुले आफ्ना फ्यानहरुलाई भगवानकै दर्जामा राखेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुले आफ्नो भगवान मान्ने दर्शकको मन जित्न र उनीहरुलाई खुशी बनाउन जे गर्न पनि तयार हुन्छन् ।
एजेन्सी – विश्वमा नै चर्चित ‘मिडिया पर्सनालिटी’ काईली जेनरले आज जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । उनी हाल २३ वर्षकी भइन् । उनी आफ्नी दुई वर्षीया छोरीसँग जन्मोत्सब मनाइरहेकी छिन् । उनले जन्मदिनको अवसरमा पहिरिएको पहिरनमा २३ लेखिएको छ । काईली मिडिया पर्सनालिटीका साथसाथै चर्चित एन्टरप्रेन्योर पनि हुन् । रियालीटी टेलिभिजन स्टार, मोडल तथा व्यवसायी काईली विश्वकै
काठमाडौँ – युवा पुस्ताको मोडलिङ क्षेत्रमा आकर्षण बढेसँगै अवसर र चुनौतीहरु समेत थपिदै गएका छन । युवा पुस्ताको सर्बाधिक रोजाइमा परेको मोडलिङ क्षेत्र दिनानुदिन फैलिदै गएको छ । त्यस्तै मोडल/नायिका बन्ने चाहना लिएर मोडलिङ क्षेत्रमा आफ्नो क्यारियर सुरु गरेकी मोडल हुन् बिपना चुनारा । नृत्य तथा अभिनयमा पोख्त मोडल बिपना चुनारा सुन्दर मुहार र आकर्षक
हजारौ मानिसको उत्प्रेरणा बन्ने सपना सोचेकी सोनिया
आफु एउटा असल मोडल र समाजसेवी बनेर भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै संघर्षतालाई निरन्तरताका साथ हरदम प्रयास गरि आफ्ना सफलतालाई मुठीमा राखी रंगमंचमा आउन प्रयासरत हुन् सोनिया बस्नेत । भोजपुर जिल्लामा २०५७ सालमा जन्मिएकी बस्नेत मोरंग स्थित सुकुना क्याम्पसमा अध्यनरत छिन । मोडेलिंग क्षेत्र भनेको कलाले भरिपूर्ण क्षेत्र रहेको र यसलाई सदुपयोग गर्न सक्दा समाजमा सुधारको पक्षधर् बन्न
यी नायिकालाई धेरै से’क्सी’ देखिएपछि सरकारले गर्यो कार्वाही !
डेनी आवश्यकता भन्दा धेरै सुन्दर रहेकोले यस्तो प्रतिबन्ध / सुन्दरताको चर्चा जहाँ पनि हुन्छ । सुन्दर देखिने चाहना जसलाई पनि हुन्छ । सुन्दरता सबैलाई मन पर्छ । सुन्दरता प्राकृतिक हुँदा अझ त्यसले बढी लोभ्याउछ पनि । तर कम्बोडियामा अचम्मको घ-टना सार्वजनिक भयो । अत्याधिक धेरै सुन्दरता कारण कम्बोडियन एक सुन्दरी समस्यामा परेकी छिन । अभिनेत्रीसमेत
नेपाली मोह ! भारतीय गायिका शुश्मिता शर्माको चर्चित नेपाली गायिका बन्ने सपना (हेर्नुहोस भिडियो)
भारत आसामकी स्थानीय चर्चित गायिका शुश्मिता शर्माको एउटा ठुलो धोको छ त्यो हो नेपाली गीत गाएर चर्चित बन्ने । संगीत बिषय नै पढेकी उनले बिभिन्न नेपाली कभर गीत र आफ्नै केहि गीत पनि गायिकीछन् । डान्समा विशेष रुचि राख्ने उनले अभिनयमा पनि हात हालेकीछन् । थुप्रै म्यूजिक भिडियोहरुमा उनलाई देख्न सकिन्छ । उनि नेपालमा आएर
अभिनेत्री साराको बिकिनी अवतार (हेर्नुहोस् फोटो फिचर)
काठमाडाैं/बलिउड अभिनेत्री सारा अली खान यतिबेला परिवारसँग रमाइरहेकी छन् । उनी फिल्मका लागि समय दिँदा पनि परिवारलाई भुल्दिनन् । बेलाबखत परिवारसँग समय बिताइरहेकी हुन्छिन् । यसै क्रममा सारा ममी अमृता सिंह र भाई इब्राहिम अली खानसँग छुट्टी मनाइरहेकी छन् । उनले छुट्टी मनाएको हट तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गरेकी छन् । सार्वजनिक तस्वीरहरूलाई समर्थकहरूले
‘कृ’ कि अभिनेत्री अदितिको हट एण्ड बोल्ड अवतार (हर्नुहोस फोटो फिचर)
अनमोल केसीसँग फिल्म ‘कृ’ मा अभिनय गरेकी अभिनेत्री अदिति बुढाथोकी मुम्बईमा रहँदै आएकी छिन । ‘कृ’ पछि यी अभिनेत्रीले अन्य फिल्ममा काम गरेकी छैनिन् । पछिल्लो समय अभिनेत्री अदितिलाई भारतीय र्‍यापर अलिप मोरानीसँग प्रेममा रहेको पनि चर्चा चल्ने गर्छन् । अदितिले मोरानीसँगको तस्वीर सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेकी थिइन् । फाटफुट हिन्दी म्युजिक भिडियोमा समेत
विकिनीमा बर्षाको बोल्ड अवतार हेर्नुहोस…
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री हुन् वर्षा सिवाकोटी । चलचित्र ‘नाईं नभन्नू ल २’ बाट चलचित्र क्षेत्रमा ड्ेब्यु गरेकी बर्षाले हालसम्म दुई दर्जन बढी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । उनको फिल्मी करियर खासै सन्तोषजनक छैन तर चलचित्रमा देखिन भने छाडिएकी छैनन् । धेरैजसो सिम्पल अवतारमा देखिने गरेकी बर्षा पछिल्लो समय भने हट अवतारमा देखिन थालेकी
दमकका थप २२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि